Mpanamboatra Packaging Flexible & Kitapo Fonosana sakafo Mpanamboatra/Mamatsy | DQ PACK
DQ PACK - Mpanamboatra fonosana malefaka ary mifantoka amin'ny indostrian'ny fanontam-pirinty nandritra ny 31 taona mahery. Tel: +86-18125839585​​​ mailaka:dqpack@danqing.net
Mitsangàna Spout Pouch
Mitsangàna Zipper Pouch
Mitsangàna Pouch Perforated ho an'ny ranom-boankazo
Kitapo tombo-kase Quad
Paosy tombo-kase telo sisiny
Sarimihetsika fonosana vita pirinty
Sarimihetsika sakana avo amin'ny endrika horonana
Sarimihetsika Pvc Shrink Sleeve
Sarimihetsika Pet Twist ho an'ny vatomamy
Sarimihetsika Cupsealing Pp, pvc, biby fiompy
Kitapo famonosana kafe/dite
Pouch famenoana vovo-drongony
Kitapo famonosana sakafo
Kitapo famonosana kosmetika
Kitapo voankazo vaovao
Kitapo famonosana ho an'ny gilasy biscuit Candy
Kitapo fonosana Popcorn
Fonosana kafe sy dite
Fonosana vokatra kosmetika sy fikarakarana manokana
Fonosana sakafo Snack
Amin'ny maha mpitarikampanamboatra fonosana malefaka, mpanamboatra kitapo fonosana sakafo, ary mitsangana mpamatsy pouch, DQ Pack dia mifantoka amin'ny indostrian'ny fanontam-pirinty nanomboka tamin'ny 1991.
Ny dingana famokarana manontolo dia tanterahina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny ISO9001-2018.Ary ny mari-pamantarana "DQ PACK CN" dia lasa anarana marika fanta-daza mitana toerana ambony eo amin'ny tsena anatiny amin'ny sehatry ny fonosana sy fanontam-pirinty.
Ny kitapo fonosana malefaka dia ampiasaina betsaka amin'ny kafe& fonosana dite, fonosana sakafo, fonosana zava-pisotro misy ranom-boankazo, fonosana sakafo ho an'ny biby fiompy, sns.
Sakafo zipper kitapo
Kitapo vatomamy endrika manokana
Ny fanamboaranay - Matihanina& MAHOMBY
Nanome OEM izahay&ODM fanamboarana kitapo fonosana sakafo sy serivisy fonosana malefaka mandritra ny 25 taona. Na inona na inona fepetra takinao, ny fahalalanay sy ny traikefanay dia manome toky anao ny vokatra mahafa-po. Manao ezaka mafy indrindra izahay mba hanolotra kalitao tsara, serivisy afa-po, vidiny mifaninana, fanaterana ara-potoana ho an'ny mpanjifanay sarobidy. Afaka manao ny loko porofo mafy sy ny vokatra fanontam-pirinty farany loko mifanaraka mihoatra ny 98%. Raha mitady custom ianao mpanamboatra kitapo fonosana sakafo, mpanamboatra kitapo mitsangana na mpanamboatra fonosana malefaka, Tongasoa eto amin'ny DQ PACK.
Famokarana na varotra entana na serivisy amidy
Trial Production& Santionany fanamafisana
Kendrenay ny hahatakatra tsara ny filanao mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny tetikasa
. Serivisy sy fanohanana
Mikasa ve ianao
fonosana ny vokatrao
DQ PACK dia manaiky ny filozofiany "manolotra tombontsoa ho an'ny mpiasa, mandray andraikitra amin'ny fiaraha-monina", mikendry ny hiezaka ho tonga tsara indrindra.
mpiara-miombon'antoka amin'ny tsena eo an-toerana ho an'ny mpanjifa sy mpamatsy manerantany.
Mandrakotra 35.000 metatra toradroa ny velaran-tany azo ampiasaina ary tonga miaraka amin'ny tsipika famonosana sy fanontam-pirinty mandeha ho azy 6, tsipika lamination 4 avo lenta avo lenta tsy misy solvent.
DQ PACK dia nohamarinin'ny BV, FDA, SGS ary GMC, ary koa ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2018.
Manome serivisy tokana izahay izay mampiditra ny famolavolana, ny fandrefesana, ny famokarana, ny fandefasana, ny fametrahana ary ny serivisy aorian'ny varotra.
Flow ny famokarana
Ny fitsipika manara-penitra ho an'ny dingana famokarana henjana, baiko 18 tapitrisa avy any ivelany.
Ny DQ PACK dia nanomboka ny fanoloran-tenany hanome vahaolana fonosana sy fanontam-pirinty mahazatra amin'ny 1991. Miorina ao amin'ny faritanin'i Guangdong, ny orinasanay dia manana mpiasa 200 mahery miaraka amin'ny trano 30,000 metatra toradroa ao amin'ny Dongshanhu Industrial Park.
Ny atrikasa famokarana dia mandrakotra velaran-tany azo ampiasaina amin'ny 35,000 metatra toradroa ary tonga miaraka amin'ny tsipika famonosana sy fanontam-pirinty mandeha ho azy 6, tsipika 4 avo lenta avo lenta tsy misy lamination. Ny dingana famokarana manontolo dia tanterahina mifanaraka amin'ny fepetra takian'nyISO9001-2018​​​​, ary ny mari-pamantarana "DQ PACK CN" dia lasa anarana marika fanta-daza mitana toerana ambony eo amin'ny tsena anatiny amin'ny sehatry ny fonosana sy fanontam-pirinty. Amin'ny maha-orinasa famonosana mora azo amin'ny fanondranana tena eo amin'ny tsenan'ny fanontam-pirinty eo an-toerana, ny DQ PACK dia nanangana sampana any Malezia sy Hong Kong..
Vahaolana mahazatra OEM, amboary ny fonosanao manokana.
Mpiasan'ny orinasa 200+, matihanina R&D ekipa.
Ny velarantanin'ilay zavamaniry dia 30000+ metatra toradroa.
Mpamorona 100+ sy ekipa teknika matihanina.
Ny dingana famokarana manontolo dia tanterahana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny ISO9001-2018, ary ny marika "DQ PACK CN" dia lasa anarana marika fanta-daza mitana toerana ambony eo amin'ny tsena anatiny amin'ny fonosana sy ny fanontam-pirinty vita amin'ny laminated.
Sary vondrona mpanjifa
Fetin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpiasa
Raha manana fanontaniana momba ny vokatra na serivisy ianao dia aza misalasala manatona ny ekipan'ny serivisy mpanjifa. Manomeza traikefa miavaka ho an'ny olona rehetra tafiditra amin'ny marika iray. Manana vidiny manokana sy vokatra tsara indrindra ho anao izahay.
Taorian'ny fanombanana eny an-kianja nataon'ireo sampan-draharahan'ny fanamarinana eran-tany eny an-toerana, ny DQ PACK dia nohamarinin'ny BV, FDA, SGS ary GMC, ary koa ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2018.
Fifandraisana: Mme Anna
Adiresy: Dongshanhu Industrial Park, Chaoan District, Chaozhou City, Guangdong, Sina
Matoky izahay fa ny serivisy customization dia outsatnding.